Inona no toa fiasana maimaimpoana amin'ny asa hafa? | Famoronana an-tserasera
Inona no toa fiasana maimaimpoana amin'ny asa hafa?
Ny iray amin'ireo zavatra manelingelina indrindra ho an'ny matihanina amin'ny sehatra rehetra dia ny fijerena ambanin-javatra ny asany. Mampalahelo fa ity dia efa ampahany amin'ny fiainana andavan'andro an'ny mpamorona sary (koa ho an'ireo rehetra izay anisan'ny faritra matihanina mamorona indrindra). Olana tokony hiatrehantsika isan'andro ary mazava fa mila miady isika. Amin'io lafiny io, ny maso ivoho kanadiana Zulu Alpha Kilo namorona horonantsary kely izay maneho ny hadalàn'ity zava-misy ity. Ho an'izany dia atolotra ny mpiasa avy amin'ny sehatra samihafa mba hampiroborobo maimaimpoana ny asany ho antsika ary efa azonao an-tsaina sahady ny fihetsika avy amin'izy ireo. Ny tsara indrindra dia ireo olona voarohirohy amin'ity horonantsary ity fa tsy mpilalao sarimihetsika na mpilalao sarimihetsika, tena mpiasa izy ireo ary tsy afaka manakana ny toe-pony ratsy ihany koa rehefa maheno fanehoan-kevitra toy izany. Ny miasa maimaim-poana dia zavatra mitaky be dia be, indrindra amin'ny tontolon'ny tsy miankina na koa rehefa manandrana manararaotra ny fitokisanao ny olona akaiky toy ny namana na olom-pantatra, fa zava-dehibe ny hianarantsika manavaka ny sehatry ny tena manokana sy ny sehatry ny matihanina.
Amin'ny farany dia miankina amin'ny fihetsika sy ny fahavononan'ny tsirairay avy amintsika izany ary tena nahita hevitra lasa klizika izahay nefa izay tena toa izao: Raha tsy manome lanja ny asanao ianao dia tsy hisy hanaja. Mametaka ity horonantsary misy dikanteny ity aho mba tsy hanadino ireo antsipirian'ny resaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Inona no toa fiasana maimaimpoana amin'ny asa hafa?
Estrella Bretones-Mora Hidalgo dia hoy izy:
Valiny tamin'i Estrella Bretones-Mora Hidalgo
Diana Calvillo Perez dia hoy izy:
Eny, ho anay creatives… mofo isan'andro, ary raha fantatrao koa ny siansa momba ny solosaina… Ny resaka rehetra ataonao amin'ny olom-pantatrao dia manomboka amin'ny:… »inona no fantatrao momba an'io…»
Valiny tamin'i Diana Calvillo Pérez